हिउँदमा पनि झिलिमिली बिजुली !
August 17, 2017 Posted by Jhilko.com
नेपाल जलस्रोतको धनी देश, बिजुली पहुँच झण्डै ४५ प्रतिशत काठमाडौं । बिजुलीको पहुँच पुगेका नागरिकसामु हिउँदमा दैनिक १५ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो । अझै पनि नेपालको ५५ प्रतिशत नागरिकले बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । अझै पनि केही क्षेत्रमा लोडसेडिङ्ग कायम छ । काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले देशका प्रमुख शहरमा पनि बत्ति जान छाडेको बताए । हाम्रा खोला नालामा पानी बगिरहेको छ । तर हाम्रा गाउँब...बाँकी
महान्यायाधिबक्तामा वसन्तराम भण्डारी
August 16, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । सरकारले महान्यायाधीवक्ताका वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने भएको छ। सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा महान्यायाधिवक्तालाई नियुक्त गर्ने गरिन्छ । यसअघि रमण श्रेष्ठलाई पुर्व प्र.म. पुष्पकमल दाहाल ले नियुक्त गरेका थिए भने उनी प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपनि आफ्नो कुरा मिलेकोले राजीनामा नगरिकन दुईवटा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएका थिए । तर रमण श्रेष्ठले साउन २९ गते राजीनामा दिएका थिए । रमण श्रेष्ठले राजिनामा दिएपछि सरकारको कानुनी...बाँकी
३२ साउन, चितवन । बाढीले बगाएर नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँमा पु¥याएका दुर्लभ एकसिँगे गैँंडालाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ल्याउनका लागि गृहकार्य थालिएको छ । हालसम्म पहिचान भएकामध्ये एउटा गैंडा मृत भेटिएको छ भने एउटा भारतीय बस्तीमा र चारवटा नेपाल र भारतका वन क्षेत्रमा भेटिएका छन् । निकुञ्जको टोलीसहित दुई दिनदेखि भारतीय क्षेत्रमा गैंँडाको खोजी गर्दै आउनुभएका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालकाअनुसार बाल्मिकी नगरबाट ४२ किलोमिटर दक्षिणपूर्व बगाहा भन्ने भारत...बाँकी
देशको एउटा भाग रोइरहेको बेला तीजको दर खाँदै म कसरी रमाउन सकुला र !
काठमाडौं । काठमाडौं गौरीघाटकी उर्वशा पौडेलले यस वर्ष आफूले तीज नमाउने संकल्प गरेकी छन् । उनले केही रकम र लत्ताकपडा बाढीपीडितको लागि छुट्टाएको बताउँछिन् । तराईमा रहेका उनका आफन्तहरुको पीडादायी अवस्थाको कारण आफूको मन रोएको उनको भनाइ छ । यस्तै रौतहट घर भएकी र हाल कामको सिलसिलामा आफ्नो पतिसँगै काठमाडौंको कालोपुल नजिक बस्दै आएकी मेनुका थापा पनि घरतिरको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताउँछिन् । उनका घर परिवार र साथीसंगीहरु डुबानको कारण बाहिर निस्कन र अत्यावश्यक खाद्यान्न किन्न नसकेर संकटमा फसिरहेका...बाँकी
३२ साउन, काठमाडौँ । लामो समयदेखि निकै बहस र चर्चामा रहेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ आज व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिने भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसअघि उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत हुने छ । नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७३ माथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । नेपालको संविधान ज...बाँकी
प्रेस काउन्सिलमा बेथिति
आचारसंहिता हेर्नेको “आचार” खोई ? प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहमतिमा पत्रकार आचारसंहिता– २०७३ जारी गरेको एक वर्ष वितिसकेको छ । पत्रकार आचारसंहिता –२०६० संशोधनसहित– २०६४ लाई खारेज गर्दै ल्याएको आचारसंहिता– २०७३ मा प्रेस काउन्सिल सदस्य आचारसंहिता –२०६४ र प्रेस काउन्सिल कर्मचारी आचारसंहिता– २०६४ प्रकाशित नगरी गायव बनाइएको छ ।जब कि२०६४को पत्रकार आचारसंहिता पुस्तिकामा सदस्य र कर्मचारीको समेत आचार संहिता प्रकाशित छन् । काउन्सिलले...बाँकी
गोविन्द केसीद्वारा अनशन स्थगन
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने प्रमुख मागसहित २३ दिनदेखि अनशनमा बस्नुभएका प्रा डा गोविन्द केसीले आज अनशन स्थगित गरेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा साँझ ८ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले तराईमा गएको बाढी र पहिरोले जनधनको क्षति भइरहेका समयमा अनशन बस्दा ग्लानी भएको भन्दै स्थगित गरेको बताए । उनका अनुसार “चिकित्सा शिक्षा र जनमुखी स्वास्थ्य सेवाका लागि मेरो सत्याग्रह जारी छ, अहिले तराईमा आई परेको प्राकृतिक प्रकोपमा सबै सहयोगमा जुट्नुपर्ने भएकाले अनशनमा बस्न उचित नभएकाले...बाँकी
लण्डनमा फूर्ति लाउँदै सुमार्गी
काठमाडौं । ‘तपाईहरुको केही समस्या भए मलाई भन्नुहोला, म हल गर्छु । मैले नेपालबाहेक विश्वका बिभिन्न देशमा ब्यापार व्यवसाय गर्ने सोंच बनाएको छु । तपाईहरुले पनि मलाई यता सहयोग गर्नुपर्छ ।’ गत मँगलबार बेलुकी लण्डनमा उपस्थित नेपालका बिबादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले गरेको आग्रह हो यो । श्रीमती, दुई छोरा र केही आफन्तसहित उपस्थित सुमार्गीले आफूलाई बाल्यकालदेखि हालसम्मका कामका विवरणको आत्मप्रशंशा गरे । उनका अनुसार उनी मेहनेत गरेर माथि पुगेका हुन, उनीमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले आक...बाँकी
प्रेस काउन्सिलका अध्ययक्ष बराललाई काम नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश
August 15, 2017 Posted by Jhilko.com
३१ साउन, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा भवानी बराललाई काम नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जाशी र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आज अध्यक्ष बराललाई काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अध्यक्ष बरालको नियुक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु बैकुण्ठ भण्डारी र राम कपालीलगायतले जेठ ९, १९ र २९ गते छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ने...बाँकी
गृहमन्त्रीद्वारा संसदलाई जानकारीः बाढीका कारण १११ को मृत्यु, ३५ बेपत्ता
बाढीले पाइप बगाउँदा खानेपानीको हाहाकार काठमाडौँ, ३१ साउन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले झापा, मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सर्लाही, सप्तरी, रौतहट, कैलाली, पर्सा, बाँके, दाङलगायत तराई– मधेशका जिल्लामा हालैका बाढीले १११ को मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उनले बाढीबाट ती जिल्लाका ८० प्रतिशत भूभागका साथ हजारौं घर डुबानमा परेको, ३५ जना हराइरहेको र हजारौं जनता विस्थापित भएको जानकारी दिँदै डुबान क्षेत्रमा हेलिकप्टरका माध्यमबाट राहत वितरण अगाडि बढेको छ बताए ...बाँकी